U-Esri upapasha incwadi kaRhulumente eSmarter kaMartin O'Malley-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/U-Esri upapasha iNcwadi yoMsebenzi kaRhulumente ebukhali kaMartin O'Malley
ArcGIS-ESRIBlogIiphotographyUkuzonwabisa / ukuphefumlelwa
U-Esri, uxele ukupapashwa kwe Incwadi yokusebenzela kaRhulumente ebukhali: Isikhokelo sokuFezekiswa kweeVeki ezili-14 soLawulo lweZiphumo Owayesakuba yiRhuluneli yaseMaryland uMartin O'Malley. Incwadi ihambisa izifundo kwincwadi yakhe yangaphambili, Urhulumente onobuchule: Ungalawula njani ngeZiphumo kwiXesha loLwazi, kwaye ihambisa ngokuthe ngqo isicwangciso esisebenzayo, ekulula ukusilandela, kunye nesicwangciso seeveki ezili-14 ukuba nawuphi na urhulumente angalandela ukufezekisa ulawulo lomsebenzi olucwangcisiweyo. Incwadi yomsebenzi ivumela abafundi ukuba benze isikhokelo se-:
Qokelela kwaye wabelane ngolwazi oluchanekileyo noluchanekileyo
Khawuleza usasaze izixhobo.
Yakha ubunkokeli nentsebenziswano.
Phuhlisa kwaye uphuculwe kwiinjongo zeqhinga lokusebenza kunye nezixhobo eziphambili zomsebenzi.
En URhulumente onobuchule, U-O'Malley ufumene amava akhe anzulu ekuphumezeni umlinganiselo wokusebenza kunye neenkqubo zokulawula ("i-Stat") kwidolophu kunye namanqanaba karhulumente e-Baltimore nase-Maryland. Ngenxa yale migaqo-nkqubo, lo mmandla ufumene ukwehla okukhulu kolwaphulo-mthetho kuso nasiphi na isixeko esikhulu kwimbali yase-US; ukubuyisela umva ukwehla kweminyaka engama-300 kwimpilo yaseChesapeake Bay kwaye izikolo zibekwe kwindawo yokuqala eUnited States iminyaka emihlanu ilandelelana.
“Kutshanje siphulukene nendima ebalulekileyo edlalwa ngabalawuli,” utshilo u-O’Malley. “Banomyalelo omanyeneyo kwaye baya phambili kwintlekele ehamba ngokukhawuleza. Ezi zizakhono zobunkokeli ezisindisa ubomi xa kukho ingxaki. ”
Ngoku, iinkokheli zingazithatha ezi zisombululo ziqiniweyo kwaye zizisebenzise kwimibutho yabo kurhulumente kwisithuba esingaphantsi kweenyanga ezine. Incwadi yokusebenzela ebukhali kaRhulumente liqabane elisebenzayo URhulumente onobuchule kunye nokufezekisa isithembiso seNkcazo.
Incwadi yokusebenzela ebukhali kaRhulumente: Isikhokelo sokuFezekiswa kweeveki ezili-14 zokufumana iziphumo Ifumaneka ngokushicilelwa (i-ISBN: 9781589486027, amaphepha angama-80, i- $ 19.99) kwaye iyafumaneka kubathengisi be-intanethi kwihlabathi liphela. Ikwafumaneka ukuze ithengwe apha esri.com okanye ngokutsala umnxeba 1-800-447-9778.
Ukuba ungaphandle kweMelika, tyelela imida yesripress ukhetho olupheleleyo loku-odola, okanye kwiwebhusayithi ye-Esri Ukunxibelelana nomthengisi wakho wasekhaya. Abathengisi abanomdla banokuqhagamshelana nomhambisi weencwadi zabo. I-Esri Press, iiNkonzo ze-Ingram zabaPapashi.
I-Google Maps, kunye nemigca yokujika